बल्ल पायो निजामती सेवाले प्राज्ञिक सचिव - Nepal Face
सहसचिव डा. मानबहादुर विके निजामती सेवामा कुनै चर्चित नाम होइन वा कुनै चर्चित मन्त्रालयका चर्चित महाशाखा प्रमुख भएका पनि छैनन् । हिजोको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार उनी सिनियर थिए र सचिव बढुवा भए । यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । तर मुख्य कुरा नेपालको निजामती सेवामा पहिलो पटक दलित समुदायबाट सचिव पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति विके भएका छन् ।
समाचारमा आयो पहिलो पटक दलित सचिव भए । डा. मानबहादुर विके दलित भएकै कारण सचिव भएका हुन् त ? पक्कै पनि होइन, नेपाली समाजमा एउटा यस्तो भ्रम छ कि निश्चित समुदाय वा जातभन्दा अरु जात बौद्धिक नै छैन, पढेलेखेको नै छैन, वा हुनै सक्दैन, पढ्नै सक्दैन यदि कथम कदाचित कोही भइहाले पनि ऊ बौद्धिक वा ट्यालेन्ट होइन र यो कुरालाई अस्वीकार्य बनाउन विभिन्न जात, थर, बर्ग र बर्णको आक्षेप लगाइन्छ । उसको क्षमता, दक्षता र विज्ञतालाई समाजमा स्थापित हुन दिइँदैन । उसलाई सधै अवसरबाट बञ्चित गराउने प्रयास गरिन्छ । मानबहादुर विकेको हकमा पनि ठिक यस्तै देखिन्छ किनकि निजामती सेवामा अहिले पनि निश्चित समुदाय वा जातको बर्चश्व कायम छ र राम्रा र अवसरहरुमा उनीहरुकै हालीमुहाली छ ।
भारतमा पनि डा. भीम राव अम्वेडकरलाई पनि अहिले त्यस्तै रुपमा व्याख्या गरिन्छ र उनीप्रतिको दृष्टिकोण विस्तारै परिवर्तन गराइँदैछ । भारतका संविधाननिर्माता डा.अम्वेडकर समकालीन स्कलरहरुमध्ये उत्कृष्ट थिए । हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मनीलगायत ८ वटा भाषाका ज्ञाता थिए र अलग अलग विषयमा ३२ वटा डिग्री थिए । उनले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, कोलम्विया र लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरेका थिए । र, उनको ७० हजार पुस्तक भएको संसारकै ठूलो निजी पुस्तकालय थियो । तर उनको विद्धतालाई गौण बनाइन्छ र अहिले त दलित नेताको रुपमा परिचय दिइन्छ ।
डा. मानबहादुर विके पनि ठिक त्यस्तै लाग्छ । उनी निजामती सेवामा एक प्रतिभाशाली प्राज्ञिक व्यक्ति हुन्, उनको यो परिचय निजामती सेवामा सुनिंदैन वा स्वीकार गरिंदैन । निजामती सेवामा आउनुपूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, यूनिसेफ, जिआईजेड लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा लाखौंको तलवमा काम गरेका उनले माइक्रो फाइनान्समा पीएचडी गरेका छन् र अमेरिकी सरकारद्वारा दिइने प्रतिष्ठित फुलब्राइट छात्रबृत्तिमा अमेरिकाको ब्राण्डिस विश्वबिद्यालयमा पोष्टडक्टरल रिसर्च फेलो रहिसकेका छन् । दर्जनौ अनुसन्धानमूलक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लेख प्रकाशित गरिसकेका उनका नेपालका दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुमा पनि नेपाली तथा अंग्रजीमा सयौ लेखहरु प्रकाशित छन् । उनले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी उन्मूलनबारे Rebuilding food regime to Eradicating Hunger नामक अनुसन्धानमूलक पुस्तक पनि प्रकाशित गरेका छन् । समकालीन प्रकाशकहरुमा उनीमात्रै होलान्, यति धेरै प्राज्ञिक र अनुसन्धानमूलक क्षमता भएका ।
समाजको पिंधमा भएको बर्गको निजामती सेवाको उच्च तहमा प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक कुरा हो तर गम्भीर प्रश्न के हो भने के साँच्चै उसको बौद्धिक क्षमतालाई स्वीकार गरिएको छ त ? समाजले अहिले पनि जात, धर्म, बर्णका आधारमा मानिसको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने गर्ने गरेको छ । र, अवसरबाट बञ्चित गराएको छ । यदि यसो हुँदैनथ्यो भने सामान्य भाषिक ज्ञान नभएकाहरु विभिन्न मन्त्रालयको बैदेशिक महाशाखा हल्लाएर विदेश डुल्नका लागि बसेका छन् भने मानबहादुरहरु गुमनाम भएर प्रदेश र खेलकुद मन्त्रालयमा बस्नुपरेको छ । साँच्चै उनको क्षमताको मुल्यांकन गरेको भए अर्थ मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाको जिम्मेवारी दिएको भए उनको क्षमताको सही मूल्यांकन हुन्थ्यो । तर विडम्वना निजामती सेवामा पास हुने तिनै भए जो कलेजमा व्याक लाग्ने अनि लोकसेवाको गाइड रट्ने र भनसुन गर्ने, अनि तिनैले ठूला जिम्मेवारी र अवसर पाउने । यो नै निजामती सेवाको विडम्वना हो, किनकि बहालवाला विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकको बोली र भूतपूर्व विशिष्टको सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति हेरे हुन्छ । हामीले कस्ता प्रशासक उत्पादन गरेका छौं र हाम्रो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अवस्था कस्तो छ ? आशा छ सरकारले उपयुक्त ठाउँमा सही व्यक्ति छनौट गर्नेछ ।
मंगलवार, आषाढ ३० २०७७०५:४४:१०